Ihe ọhụrụ 3 nke Supergeo - Geofumadas
Ozi 3 si Supergeo
Julaị, 2013 innovations, SuperGIS
Site n'aka ndị okike nke usoro SuperGIS anyị na-enweta ụfọdụ ozi bara uru ịnapụta.
Ngalaba Ọha na Fujairah Ọha na Ọrụ Ugbo na - eme ka nkwado a na - arụ na SuperGIS
Fujairah bụ otu nke United Arab Emirates, na Middle East. Ha ekpebiela iji mejuputa teknụzụ SuperGIS maka ijikwa usoro ndụ nke ihe nrụpụta, gụnyere njikwa akụ, atụmatụ usoro yana mmekọrịta data n'etiti ndị ọrụ.
Ọ bụ ihe na-akpali mmasị ka teknụzụ CAD / GIS si abanye na njikwa nke ọrụ ọha na eze karịrị njikwa data, na arụ ọrụ. Ma obu na oru ndi mmadu bu uzo di nkpa ma dikwa mkpa na mmepe mba nke mba; ha jikọtara omume anyị na okike.
N'otu n'ime njem ndị ọzọ m na-atụ anya ka m leba anya na nke a, n'ihi na m ga-eche n'echiche nke Bentley AssetWise nke fọrọ nke nta ka ọ dịrị njikere maka nke ahụ, mana ịhazi ngwa ọrụ ọtụtụ n'ime anyị na-ejikọ oge niile na eserese bụ… karịa ihe na-atọ ụtọ. Ha ga-eme ya na SuperGIS Desktọpụ 3.1 iji jeere data, dị ka Busolini na CONSTANTINI PROGETTI na Italytali mejupụtara site na itinye SuperSurv aka maka njikwa ọkụ n'okporo ámá.
Na mgbakwunye, ọ na-emetụ m n'ahụ na nke a bụ nnweta nke ihe anyị nwere ike iji anya nke uche hụ na ngosipụta njikọta n'etiti SuperGeo na GeoSystems na Middle East Geospatial Forum. Akụkụ na-adọrọ mmasị nke onye nrụpụta na onye na-ere ọrụ na-enye onyinye nke ha abụọ ritere uru.
SuperSurv 3.1 SuperPad 3.1atan Google Maps / OpenStreetMaps dị ka map ndabere
Iji ngwaọrụ Map dị n'ịntanetị, ngwaọrụ abụọ a na-ekwe ka ndabere n'azụ bụrụ maapụ ntanetị, dị ka oyibo Google Maps ma ọ bụ OSM.
Yabụ, mgbe ahụ, ọ bụrụ na anyị eburu maapụ mmepụta anyị site na sava SuperGIS 3.1, ọ ga-ekwe omume itinye ya n'azụ mgbe ị na-ejide ma ọ bụ na-emelite eserese ma ọ bụ data ụdị dị ka SuperSurv.
Ozi ndi ozo banyere SuperSurv 3.1, http://www.supergeotek.com/LandingPage_SS3.1.aspx
I nwekwara ike ibudata ụdị akwụrụ na http://www.supergeotek.com/download6mobile.aspx
A ga-ewepụta SuperPad 3.1 na ụzọ n'ụzọ atọ nke 201.
Mbipụta ọzọ nke SuperGIS ga-agụnye asụsụ Spanish
Otu n'ime ihe ịma aka kachasị mma nke ngwanrọ a bụ nzube ya ịbịa na-asụ Spanish. Maka nke a, anyị nwere obi ụtọ ịkọ na ha etinyela Spanish na nsụgharị ya ọzọ, nke anyị ji n'aka na ọtụtụ ndị ọrụ na ụlọ ọrụ ga-adị njikere ịbanye na ngwanrọ nwere ikike ịsọ mpi n'ụwa niile. N’agbanyeghi na amuru ya na Taiwan, o nwere ezi uche itinye ego na asusu anyi; ihe kwesiri ka anyi kwanyere anyi ugwu.
N'ebe a, ị ga - ahụ vidiyo dị ogologo nke otu o si arụ ọrụ:
Previous Post«Previous Vbookz, ọkpọ ọkpụkpọ kacha mma maka iPad / iPhone / iPod
Next Post Enwere m ike iji ihe oyiyi Google Earth maka cadastre?Next »